Malagasy miara-miainga, Ramaroson Laurent : «tokony hanadio sy hamafa trano ny governemanta vaovao » | NewsMada
Malagasy miara-miainga, Ramaroson Laurent : «tokony hanadio sy hamafa trano ny governemanta vaovao »
Naneho ny heviny tao amin’ny onjampeo Alliance 92 FM amin’ny alalan’ny fandaharana “Ambarao”, omaly ny birao politikan’ny Malagasy miara-miainga, Ramaroson Laurent. Notanisainy tamin’izany ireo tokony ho asa na iraka hataon’ny governemanta.
“Apetraho ny lalàna sy ny fitsipi-dalao. Asan’ny governemanta ny mijery izany satria anisan’ny nahatonga ny depiote niala teny Tsimbazaza nankeny an-dalambe io lalàm-pifidianana io. Tokony hamoaka io lalàna tsy miangatra io izy ireo. Anjarany izany. Asany koa ny hanadio ny paika maloto efa napetraky ny governemanta teo aloha, hatrany ambanivohitra any, hanodinana ny safidim-bahoaka hanerena ny vahoaka hifidy ny HVM. Mamafa trano izany izao governemanta vaovao izao…”, hoy izy. Niaiky ny tenany fa nisy fitakiana manoloana ny fijaliana sy fahasahiranan’ny vahoaka. Tsy nihenoina tao anatin’ny efa-taona izany. Tsy nihetsika ny sendikà nandritra izany ka manana fitakiana tokony haterina eny Tsimbazaza, araka ny nambarany. “Efa voarain’ny depiote izany ary anjarany ny mijery sy mandinika ary mamadika ho lalàna ireny satria amin’ny febroary vao mifarana ny fe-potoam-piasan’izy ireo”, hoy ity birao politikan’ny Malagasy miara-miainga ity.
Nanteriny fa tokony hokabarin’ny depiote eny amin’ny kianjan’ny 13 mey ny nandraisan’izy ireo ny fitakiana ary entina hanerena ny mpitondra ho avy eo. Notsiahiviny fa anisan’ny asan’io governemanta vaovao io ny manao ny fomba rehetra handehanana hanehoan’ny olona ny safidiny amin’ny fifidianana filoham-pirenena hanatanteraka ny hetahetan’ireo nanao fitakiana. “Tsy ity fitondrana ity ny hanatanteraka ny fitakiana rehetra afa-tsy ireo tena maika, toy ny tambin-karama sasany ho an’ ny mpampianatra ohatra noho ny familafilana etsy sy eroa. Mety azo atao sy tanterahina avy hatrany izany. Misy kosa anefa miandry ny filoha vaovao. Ohatra, ny fanovana ny satan’ny mpiasam-panjakana”, hoy Ramaroson Laurent.
Samy hotsarain’ny nataony avokoa ny rehetra
Etsy andaniny, nisy koa ny fitakiana teny an-kianja amin’ny fanaraha-maso ny harem-pirenena navoaka sy ny momba ny fananam-panjakana etsy sy eroa. Nohitsiny fa anjaran’ny governemanta na ny minisitra vaovao ny mijery antsipiriany ny momba izany. “Ny tsy tokony hihetsehan’ilay minisitra teo aloha hidiran’ny Bianco sy ny mpisafondraharaham-panjakana an-tsehatra. Hotsarain’ny nataony avokoa ny rehetra. Tokony ho asan’io governemanta araka ny fitakiana teny an-kianja izany. Mamantana trano madio ny fitondrana vaovao aorian’ny fifidianana ary miainga avy hatrany ny fampandrosoana sy famaliana ny fitakiana samihafa, araka ny fandaharanasa nofidin’ny vahoaka”, hoy ihany izy.
Momba ny tetibolam-panjakana kosa, nambarany fa azo ampiasaina ny efa nolanin’ny parlemanta tamin’ny taon-dasa. Notsindriny fa anaty fivoriana ny parlemanta izao ary hanitsy ny tetibola ka tokony ho anjaran’ny governemantan’i Ntsay Christian ny mamolavola izany hoentina eny amin’ny Antenimiera.
Depiote namadika palitao sy nanao kolikoly
Namintinany izany rehetra izany ny filazana fa anisan’ny takina amin’ny governemanta ny hanomanana fifidianana tsy mitongilana sy marina. Ilana olona mahay mikarakara sy manomana ny fifidianana. “Matanjaka amin’ny fitanana kifafa sy ny fampandehanan -draharaha ny tokony ho minisitra. Anjaran’ny lehiben’ny antoko ny mijery ny olona tokony ho minisitra, miainga amin’ny lalàmpanorenana. Hitana kifafa sy hanadio trano amin’ireo raharaha maloto sy hijery izany”, hoy izy.
Ny momba ny kolikoly nataon’ny depiote, handondona ny Bianco ny governemanta vaovao. Tahaka izany koa ny fanonganana ireo depiote nivadika palitao. Tokony hojeren’ny HCC. “Efa hita porofo ireo depiote Malagasy miara-miainga nivadika ka manahirana ihany izany. Mametraka fitokisana feno amin’ny governemanta vaovao amin’ny firosoana amin’ny fifidianana mangarahara sy hampalalaka ny safidin’ny vahoaka izahay. Ka tokony handraisany fepetra ny sakantsakana samihafa mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana”, hoy ny birao politikan’ny Malagasy miara-miainga, Ramaroson Laurent.